Blockchain Izindaba 14.05.2018 - Blockchain Izindaba
isikhungo New York izinhlelo idolobha blockchain
Umemezele ngoMsombuluko ngesikhathi ngesonto blockchain eNew York, i-New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) isungula kunemizamo eminingi ukubeka idolobhakazi kumephu njengoba blockchain ubuchwepheshe Ihabhu. Evelele uhlelo ukuze uvule “Blockchain Centre” ezokwenza kokubili ukukhuthaza ukuqaphelisa komphakathi ubuchwepheshe kanye lula izingxoxo phakathi umkhakha abathintekayo.
I NYCEDC uphinde wamemezela umncintiswano, kulindeleke ukuba ziqale ukudayisa ngasekupheleni 2018, okuhloswe imicondvo ngokuthuthukisa tamasipala kanye tech blockchain.
Samourai futhi goTenna kwethulwa Bitcoin isikhwama esebenza ngaphandle inthanethi
Njengoba inthanethi akuzona njalo kuyatholakala, okuthembekile noma yangasese, abasebenzisi cryptocurrency kudingeka ezinye izindlela ukuxhumeka kunethiwekhi. Ngakho uqalisa ezinze eNew York goTenna, eyasungulwa ngo 2012 by zakubo Brazilian UDaniela Jorge Perdomo, ibambisene Samourai Wallet ukuze uqalise uhlelo lokusebenza Android kuleli hlobo evumela abasebenzisi ukuthumela bitcoin izinkokhelo ngaphandle uxhumano lwe-inthanethi.
“Udinga ukwazi ukuchitha bitcoin wakho ngisho ezindaweni zenhlekelele,” goTenna unjiniyela Richard Meyers wathi, bephawula Perdomo zakubo’ umsebenzi yamuva e Puerto Rico, lapho goTenna amadivayisi wasiza abantu ukuxhuma futhi ngemva kokuba iSiphepho Maria. “Uma nje unayo indlela ukushaja ifoni yakho, ungaba futhi ekubambisaneni nokuxhumana.”
“It unikeza ehlukile ukucwaninga-livikela kakhulu,” Meyers wathi.
intela Florida ngalendoda okokuqala US gov ejensi ukwamukela Bitcoin
A Florida intela County ngalendoda ihlangene ne Bitcoin izinkokhelo processor BitPay ukwamukela cryptocurrency for ezihlukahlukene services.
Seminole County lokuqoqa Joel Greenberg esitatimendeni ngoMsombuluko ukuthi ihhovisi lakhe kuzothatha Bitcoin for izinkokhelo ezihlobene ne zokushayela kanye namakhadi ID, imoto tags kanye izihloko nentela yempahla.
“Inhloso umhlaba wami ehhovisi ukwenza ikhasimende isipiliyoni sethu ngokushesha, ehlakaniphile nesebenza kangcono, futhi ukuletha izinsiza zikahulumeni kusukela ngekhulu le-18 kwaze kwaba phakathi nekhulu lama-21 futhi omunye indlela ukwengeza cryptocurrency izinketho wokukhokha… nehhovisi Seminole County lokuqoqa intela, sesike ejensi yethu yokuqala kuhulumeni ukwamukela Bitcoin… ngokwenza kubelula futhi nekhono ngabo,” wanezela.
NASDAQ Inamandla cryptocurrency exchange ukuqalisa ngoJuni
dx.exchange, okuyinto lihlelwe ukuqalisa ngenyanga ezayo, is the mfihlo exchange lokuqala inikwa amandla yi-NASDAQ. "Inzuzo yalesi ukubambisana mithathu: igama lomkhiqizo, ubuchwepheshe kanye neziqondiso,"Kusho isikhulu esiphezulu enkampanini DX Exchange Daniel Skowronski.
Ngenkathi inzuzo sokuqala ngempela kucacile, Skowronski aqhubeke echaza ukuthi ubuchwepheshe sabo kwakuyodingeka ancike ingqalasizinda NASDAQ sika, ezifana lelihambisana yayo injini - esetshenziswa phezu 70 Ukuhwebelana emhlabeni wonke.
SAP ukuqalisa blockchain supply iphrojekthi
Zamazwe isofthiwe ngokuqinile SAP uyanda umsebenzi waso blockchain esikhaleni supply chain.
SAP ifuna ukusebenzisa wezobuchwepheshe wezolimo ukunikezela amaketanga ngendlela Ipulazi yayo Umthengi isinyathelo.
Torsten acce, phambili SAP sika blockchain wathi “Ubuchwepheshe sithuthukiswe ivumela izinkampani umkhondo womsuka imikhiqizo ukudla, faka izicelo neminikelo, futhi ukugunyaza futhi akhiphe ukuthengiselana.”
Ethereum Foundation yamemezela kubamukeli "wave lokuqala izibonelelo" ka $ 2.5 abayizigidi ezingu
Njengoba kwabikwa kuyi-o ...
Thumela Previous:Crypto Nentsha
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 15.05.2018